GARDENIA JASMINOID - DARYEELKA IYO DAYACTIRKA, CUDURADA IYO CAYAYAANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Jasmine-qaabeeya beerta - quruxda cad ee ubaxa leh caleenta cagaaran ee cagaaran
Jasmine-qaabeeya beeriyuhu waa ubax qurux badan oo qurux badan oo ka baxsan cid aan indho la'aan aheyn. Qaar badan oo beeralaydu waxay ku riyoodaan inay gartaan warshadkan quruxda badan, laakiin ha ku dhicin sababtoo ah dabeecadeeda mugdiga ah. Si kastaba ha noqotee, quruxdu waxay noqon kartaa "tamed" haddii aad ogtahay dhammaan siraha iyo murugada ee ay beerashada.
Jasmine-qaabeeya beerka, oo ku yaalla Laatiin loo yaqaan Gardenia jasminoides, waxay ka timaadaa qoyska Marenov wuxuuna ku dhashay hooyo Hindiya, Shiinaha, Japan, Taiwan, Woqooyiga Afrika. On cirifka dabiiciga ah waxaa laga heli karaa qaab ah geed caleenta ubax ah ilaa 2 mitir sare. Dhaqanka dheriga ah ee duurka wuxuu gaadhaa in ka badan 60 cm oo dherer ah.
In cirifka Gardenia waxaa jira qiyaastii 250 nooc, iyo in ubax beerista beerta jasminoid beerta kaliya ayaa qaaday xididka. Ubaxyo waaweyn oo cad oo leh caraf udgoon ee jasmine fascinate at aragga marka hore. Waxay hoos u dhigaan si isdaba-joog ah ama isu soo ururiyaan inflorescences dhowr qaybood. Inta badan ubaxa waa semi-double ama Terry, oo la mid ah qurux badan Rose.
Aad u qurxin iyo caleemo cagaaran oo madow. Qaab ahaan, waxay si ballaaran u yihiin lanceolate leh caarada fiiqan, gaaraya 10 cm dherer. Saxanka xaashida leh waxay leedahay dusha sarreeya, glossy glossy.
Guud ahaan, berrito gudaha ah waa geed cirif ah oo leh caleenta cufan, gaar ahaan soo jiidasho muddada ubax. Daryeelka haboon, nolosha nololeed ee wakiilka flora ee fiican waa ilaa 7 sano.
Gardenia waxaa loo keenay Europe dib markii qarnigii 18aad. In dalalka diiran, waxay qurxisaa beeraha iyo beeraha, iyo cimilada qaboobaha ah, waxaa lagu hayn karaa kaliya guriga ama xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo. Iyadoo loo marayo dadaalka ah ee breeders soo bandhigay noocyo badan oo qurux badan.
Qurxoon ama Beauty Beauty - Waxaa laga yaabaa in noocyada ugu caansan ee leh ubaxyo baraf ah oo caddaan ah. Blooms ka bilaabo horraantii Juun ilaa dayrta.
Belmont, aka Belmont - waxaa lagu kala saaraa ubaxyo cufan leh waana kan ugu carafka badan. Waxay u adkaysay caabbinta cudurada.
Amy ama ujeeddada - baadiyaha oo leh ubaxyo waaweyn oo ah qaabka ugu wanaagsan ee loo yaqaan terry ideal, gaarey 12 cm dhexroor. Awood u leh inuu ubaxdo laba jeer sannadkii.
Qarsoodi ama Qarsoodi Laatiin ah - kala duwan oo adag oo adag oo leh caleemo waaweyn, koraya vertical. Ubaxa waa weyn, Terry flat.
Variegata, aka Variegata - qaab isku dhafan oo isbeddel leh oo leh ubax yar yar. In midabka caleenta, marxaladaha cagaaran ilaa kareem fudud ayaa lagu arkay. Boosku wuxuu si tartiib ah u koraa oo wuxuu ku fiican yahay koritaanka dheriga.
Ragga ama Radikiska - kala duwanaa caviif leh caleemo yar yar iyo ubaxyo yar yar. Kala duwanaantani waxay bilaabmaysaa in ay ka dambeyso marka loo eego qaraabada ayada oo ay ku fiican tahay koritaanka farsamada bonsai.
Muujiyaa daryeelka guriga ee beerta jasmineerka
Gardenia Jasminoid aad u xaddidan iyo daryeesho iyada oo ku jira dhibaatooyinka qaarkood. Waxay si macquul ah wax uga qabataa isbedel kasta oo ku dhaca shuruudaha by huruuda caleemaha iyo ka saarista burooyinkeeda. Guulaha dhirta sii kordhaya waxay ku waafaqsan tahay dhammaan shuruudaha ay ku xiran tahay.
Beerta qurxoon ee quruxda badani waa mid aad u fiican oo iftiin dhalaalaya, laakiin ma ahan qoraxin firfircoon. Galabnimadu waa lagama maarmaan inay ka ilaaliso qorraxda firfircoon ee leh daahir shucaac ah. Haddii kale, gubashadu waxay ku muuqan doontaa xaashiyaha. Meesha ugu fiican waa koofur galbeed ama daaqad galbeed. On daaqada waqooyiga-waxay u baahan tahay iftiin dheeraad ah.
Ubaxa uma dulqaadanayo dhaqdhaqaaqyo isdaba joog ah, sidaas darteed waa mid aad u macquul ah in si deg deg ah u siiso meel joogto ah guriga.
Wuxuu si gaar ah u necbaa isbeddel inta lagu jiro ubax iyo xitaa laga yaabo in uu kuusiqiyo burooyinkooda si ay uga jawaabaan tartiib tartiib ah.
Heerkulka ugu wanaagsan ee warshadda xagaaga - laga bilaabo 21 illaa 24 ° C, xilliga qaboobaha - illaa 16-18 ° C, dhimista 10 ° C waa la aqbalayaa.
Inta lagu jiro bilaha jiilaalka, qaboojintu aad ayey muhiim ugu tahay isaga, taas oo ay ka yar tahay xaaladaha iftiinka aan ku filnayn.
Quruxda ayaa si aad ah ujirta qashinka iyo dhibcaha heerkulka.
Laakiin gaar ahaan waxay ka baqaysaa hypothermia ee xididada iyo waxay ka falaan kartaa iyada oo ay hoos u dhicin caleenta iyo cagaha xididada. Sidaa daraadeed waa inaadan dhejin xayawaanka cagaaran ee dusha qabow. Xaaladdan oo kale, sicir-barar kasta ayaa kaa caawin doona.
Waxaad ubaahan tahay inaad biyo udajiso ubax aad uwanaagsan. Aad bay halis u tahay isaga oo ah dhoobo dhoobo ah, iyo boodhkeeda. Guga iyo xagaaga, dhulka waa in had iyo jeer ku haray qoyaan, xilliga jiilaalka waxaa loo oggol yahay in uu qalajiyo inta u dhaxeysa waraabinta. si qoto dheer ah 1.5 cm.
Biyaha waa in la kariyaa, laga saaraa nijisada iyo waxoogaa diiran. Waxaa lagama maarmaan ah in la qaato marwalba marwalba si aad uga daadiso digsiga ka dib markaad waraabiso. Waa mid waxtar leh in la cabo biyaha leh liin liin (dhibco yar oo halkii litir). Nafaqooyin badan ayaa waxaa lagu nuugaa dhirta oo keliya marka loo eego jawiga aashitada.
Qoyaan badan - Xaaladda kale ee muhiimka ah ee quruxda quruxda. Waxay jeceshahay buufinta maalinlaha ah. Xilliga xagaaga, daaweynta biyaha waa in ay si gaar ah u noqotaa. Buulada ubaxa waa in lagu buufiyaa si taxadar leh si dhibcaha qoyaanku aysan ku dhicin xayawaan jilicsan. Waxyeello ma laha in geedkii lagu dhajiyo saxaarad qoyan iyo meel u dhow weelasha ku dhow biyaha.
Laga bilaabo gu'ga ilaa dayrta, dhirta waxaa la quudin jiray labadii toddobaadba mar, oo u dhaxaysa Bacriminta ubax iyo wax kasta oo Bacriminta dabiiciga ah. Waxaad isticmaali kartaa bacrimin ah for azaleas. Marar dhowr jeer xilli ciyaareed, dharka foliar waxaa lagu sameeyaa diyaar garowga birta.
Laga bilaabo Oktoobar ilaa Laba Bisha, dhirta ayaa leh nasasho nasasho ah marka ay nasaneyso iyo helayso xoog. Wakhtigan, waraabinta ayaa la yareeyey, quudinta ayaa la joojiyay. Nasasho ee ubaxa waa mid aad u muhiim ah si aysan u noqon daalan oo loo diyaariyey in ubaxyada cusub oo cusub.
Beerta qurxoon ee quruxda badan ee xagaaga hore ilaa oktoobar. Waxay diyaarisaa ubax muddo dheer. Marka la gooyo burooyinkeeda (Maarso-Abriil), baadiyaha waxaa loo waraabiyaa si dhexdhexaad ah, oo laga ilaaliyo qorraxda dhalaalaysa, qolkuna si joogta ah ayaa loo duubay (iyada oo aan la qorin!). Xilligan, heerkulka saxda ah waa mid muhiim ah: habeenkii - laga bilaabo 16 illaa 18 ° C, galabtii - min 18 illaa 20 ° C.
Iyadoo ay soo ifbaxayaan burooyinkooda waxay u baahan yihiin daryeelka ugu taxaddar badan. Dhammaan xaaladaha xabsiyada waxaa si adag loo ilaaliyaa. Waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero heerkulka, qoyaanka, kiimikada dhulka, iwm. Si qalad ugu yar ee korriinka, quruxda dhererka leh waxay tuuri kartaa burooyinkeeda. Kuur ubax ah waa in aan dib loo habeynin oo lagu dhejiyo wareeggiisa, waana wax aan suurtogal ahayn in la taabto ubaxyada gacmahaaga.
Ubax kasta beerta waxaa loo kaydiyaa baadiyaha qiyaas ahaan hal usbuuc.
Waxaa xiiso leh, inta lagu jiro muddadan, midabkiisa barafka-cad wuxuu bedeli karaa, noqoshada huruud ama huruud.
Qaar badan oo growers ubax, gaar ahaan bilowga ah, xayawaanku si diidmo ah u diidaan in ay ubaxyada, taas oo ay jiraan sababo badan. Tani waxay noqon kartaa mid aan ku filneyn ciidda, beeraha biyo adag, hawo qalalan, iftiin yar, maqnaansho ama nafaqo badan, heerkul aad u hooseeya ama heerkul aad u sarreeya iyo xadgudubyada kale ee xaaladaha. Sida aad u arki karto, ilaalinta adag ee dhammaan xeerarka daryeelka ee waxay quruxda u muujin doontaa ammaanta oo dhan.
Foomka wax ku oolka ah ee baadiyaha waxaa lagu gaaraa marin habboon. Si loo helo suufka shaybaarka yaryar oo qanjirta dusha sare ee caleemaha. Dadka qaangaarka ah, xayawaanka daciifka ah ayaa la saaraa, caleemaha haray ayaa la gooyaa ilaa saddex meelood meel ka mid ah dhererka.
Si aad u sameysid geedka aasaasiga ah, laamaha ayaa laga saaraa oo keliya qaybta sare ayaa laga tegayaa. Marka la gaaro height ee la rabo, jiido meesha ugu sarraysa ee koritaanka iyo foomka a taajkii, jarida caleemaha xad-dhaaf ah.
Ubaxa wuxuu u baahan yahay xubin kaabis ah. Waa lagama-maarmaan marka ay dhererku aad u yaraato, xididada ayaa ku faafay dhulka oo dhan ama waxaa jira dhibaatooyin iyaga leh.
Qalabaynta waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo guga ama kadib ubax. Doorashada dhexdhexaadku waa marin kasta 2-3 sano.
Carrabku wuxuu u baahan yahay dhanaan, dabacsan iyo nafaqo leh. Waxay ku habboon tahay substrate for azaleas. Ama waad ku farxi kartaa saaxibta cagaaran adiga oo isu diyaariya iskudhaf isku mid ah:
Ciid adag, vermiculite ama perlite
Waqti ka dib, dhul sida dhul-beedka ah ayaa la ciribtiri doonaa. Sidaa darteed, mustaqbalka, waxaa lagama maarmaan ah in ay acidify bishii iyada oo leh biyo leh citric acid (laba dhibcood ayaa ku dhuftey 1 l) iyo fitamiin buluug ah (0.5 g halkii litir oo biyo ah). Ama waxaad u isticmaali kartaa inaad waraabiso biyaha lagu dhaliyo peat.
Kaliya iibsatay beerta quruxda badan lama beddeli karo. Waa inaad sugto laba ama saddex todobaad oo hubi in ubaxu uu dhammaado. Muddadan ka dib, ubaxa ayaa si tartiib ah looga saaraa dheriga (waxaad u baahan tahay inaad hoos u dhigto oo, qabato saldhigga asliga ah iyo ruxidda duurka, ka soo saar weelka). Markaas waa in ay ahaataa sida ugu macquulsan si aad u nadiifiso xididdada gaadiidka ee ciidda, ma aad u faa'iido iyaga, iyo xayawaanka xayawaanka cusub ka yar wax weyn ka hor hore. Lakabka qaro ee dheecaan ayaa looga baahan yahay xagga hoose.
Gubis Mashiinka. Guga ama dayrta, gooynta apical ku saabsan 10 cm dheer waa la gooyaa baadiyaha, 3-4 caleemood sare ayaa laga tagayaa, intiisa kale ayaa laga saaray. Gooynta ayaa hoos loo dhigay daqiiqado yar oo Kornevin ah, ka dibna lagu beeray qalajin ciid ah, oo la buufiyo oo lagu daboolo bireed, ma ilaawin biyaha iyo si joogto ah u hawo. Gooynta waxay qaadataa xidid qiyaastii hal bil ah, ka dib markii lagu beddelay ciidda ku haboon. Burburintu waxay u dhacdaa si dhakhso ah haddii aad isticmaasho ciidda hoose ee kulul.
Seeds, kaas oo laga soo qaadan karo baadiyahaaga ama iibsanaya dukaanka. Waa lagama maarmaan inay yihiin kuwo cusub - kuwa hore waxay leeyihiin heer aad u yar yar. Beeridda ayaa la sameeyaa horraanta gu'ga. Abuurka waxaa lagu qooyay maalin maalin kadibna lagu beeray digirta ciidda si qoto dheer oo aan ka badnayn 5 mm. Awoodda leh dalagyada daboolaya filim ama dhalo iyo meel meel diiran. oo leh heerkul aan ka yarayn 25 ° C. Iyadoo lagu buufinayo joogtada ah iyo cirbidda caleemaha kowaad ayaa laga filan karaa bil gudaheed. Warshadda koray laga bilaabo abuurka ayaa ubaxi doonta oo keliya dhowr sano kadib.
Gardenia, oo si madax bannaan koray laga soocay abuurka, waa wax aan fiicnayn, caadeysana xaaladaha gudaha iyo caafimaad wanaagsan.
Marka koraan beerta ubax growers-ubax la kulmaan dhibaatooyin badan. Kuwa ugu caansan waa:
Waa maxay sababta caleemo u noqdaan huruud Inta badan waxay u badan tahay sababta ah isbeddelka heerkulka, waraabinta aan habbooneyn ama aysidhka sare ee carrada. Nidaamka heerkulka habboon iyo waraabinta saxda ah ayaa kaa caawin doonta sidii loo saxi lahaa xaaladda. Hirgelinta birta chelate ee ciidda waxay kaa caawin doontaa in la yareeyo astaamaha carrada.
Caleemo huruud ah iyo dayrta. Dhibaatadani waxay ka soo bixi kartaa la'aanta iftiinka, nafaqo la'aanta, qalajinta ama qallajinta dhoobada dhulka. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad baadiyaha ku shubtid meel wanaagsan oo iftiin leh shoog yar, bacriminta quudinta for azaleas iyo aasaas waraabinta saxda ah.
Waa maxay sababta caleemo u noqdaan madow Sababta ayaa ku jirta biyo badan ama qorraxda. Warshadda daadadku waa in la beddelo. Haddii ay dhacdo gubasho, ka saar dhammaan caleemo burbursan oo soo dhig dhar xilli wakhti ah ee hooska.
Madow iyo dhicida caleemaha iyo burooyinkeeda. Tani waxay ka dhici kartaa qulqulatooyin, dhirta xididada, heerkulka aan fiicneyn iyo xaaladaha iftiinka. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso daryeelka saxda ah iyo inaad u hoggaansamiso talooyinka kor ku xusan. Baadhitaan aad u culus ayaa lagu beeray ciid cusub, oo ka saara dhammaan qaybaha ay saameeyeen. Noocyada ayaa laga yaabaa in ay madow ku noqdaan buufin aan xishood lahayn. Waa in aan la iloobin in ay la silcayaan dhibicda qoyaanka qoyaanka.
Caleemo qallalan. Haddii caleemaha ay u muuqdaan kuwo huruud ah ama hoos u dhacaya, waxay la macno tahay in ubaxa uu helay diiqad halis ah qaabka loo yaqaan "abaarta" ee dheriga. Waa in laga fogeeyaa dariishadda furan ama albaabka balconyka, isku hagaajinta waraabinta iyo qaadashada koorso lagu buufiyo Epin.
Haweenka quruxda badani waa khatar:
Xakamaynta cayayaanka waxaa lagu sameeyaa caawimo cayayaanka. Qabtay labo ama seddex daweyn ah oo dhexdhexaad ah 7-8 maalmood illaa dhammaadka burburinta cayayaanka. Ka hortagga cayayaanka - kormeer joogta ah ee caleenta, ilaalinta qoyaan ku filan, ilaalinta baadiyaha nadiif ah.
Si aan loo baahnayn in la yiraahdo, daryeelka beerta jasminoid waxay u baahan tahay xoog badan, sabir iyo dadaal. Laakiin shuqulladu maaha kuwo aan waxba tarayn. Iyada oo laga jawaabayo daryeelka iyo dareenka, xayawaanka cagaaran ayaa dhab ahaantii ku siin doona bouquet raaxo leh quruxda neefsiga.
Marka xigta waxaad arki doontaa sawirada cudurada iyo daryeelka guriga ee ubaxa Gardenia Jasminoid: